Imandarmedia.com.np: महन्थ ठाकुरको राजपा फुट्ने निश्चित, को-को जादै छन् पार्टी छोडेर ? हेर्नुहोस् नामसहित
Big News, Newspaper, Political » महन्थ ठाकुरको राजपा फुट्ने निश्चित, को-को जादै छन् पार्टी छोडेर ? हेर्नुहोस् नामसहित
महन्थ ठाकुरको राजपा फुट्ने निश्चित, को-को जादै छन् पार्टी छोडेर ? हेर्नुहोस् नामसहित
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको बुधबार प्रारम्भ भएको पदाधिकारी बैठक वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी समूहले बहिष्कार गरेको छ ।
त्रिपाठी समूहमा सांसदहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, बृजेशकुमार गुप्ता, अकवालअहमद साह, कमलेशवर पुरी गोस्वामीसहित आधा दर्जन नेता छन् । पदीय विवादकै कारण पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेको त्रिपाठी समूहका एक नेताले बताए ।
– नीति/विधान, दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने
Trending : Big News, Newspaper, Political